Taalibaan oo si rasmi ah u bedeshay calankii Dalka Afghanistan | Dayniiile.com:-wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Taalibaan oo si rasmi ah u bedeshay calankii Dalka Afghanistan
Taalibaan ayaa calankooda ka taagay xarunta madaxtooyada Afghanistan Sabtidii, sida uu xaqiijiyay afhayeenkooda, xilli Mareykanka iyo adduunka intiisa kale ay xusayaan sannad-guuradii 20 -aad ee weeraradii 11 -kii September.
Previous articleAyman al-Zawahri oo fariin u diray dagaalyahanada Al-shabaab.
Next articleBritain oo meesha ka saartay in baasaboorka tallaalka korona lagu soo rogi doono Englan
Yaa ka dambeeyey warqada laga faafiyey Rooble, maxaase ku qoran?
Waxaa baraha bulshada lagu faafiyey waraaq been abuur ah oo ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, xilli ay sare usii kacday...
Burcadda Nigeria oo sii daysay toban arday oo laga afduubtay gobolka...
Madaxweyne Geelle oo dalka dib ugu soo laabtay.
Midowga Yurub oo ugu baaqay u diray Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare...
Muddaharaad rabshado wata oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka...